KAOMININA AMPITATAFIKA: Ny mampandeha ny fampandrosoana | déliremadagascar
KAOMININA AMPITATAFIKA: Ny mampandeha ny fampandrosoana
Socio-eco	 5 janvier 2019 lynda
“Tsy maharitra iray volana akory ny fanampiana avy fanjakana kanefa misy 12 volana ny taona iray”, hoy ny ben’ny tanàna ny kaominina Ampitatafika, Rado Ramparaoelina. Nambarany fa miha sarotra ny fitantanana ny kaominina satria lasa handoavana ny karaman’ny mpiasa sy fampandehanan-draharaha sisa ny vola miditra amin’ny kaominina. Na dia eo aza izany, mahavita dingana amin’ny fampandrosoana ny tanàna ny kaominina fa tsy mijanona amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa amin’ny lafiny fampandehanan-draharaha fotsiny.
Raha atao ny jery todika tamin’ny taona 2018, nisy ny asa vita na dia nihena aza ny hetra niditra tamin’ny kitapom-bolan’ny kaominina noho ny antony maro samihafa. “Nalaina nandoa hetra ny mponina vao nanomboka ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy hay mihitsy ny antony”, hoy i Rado Ramparaoelina. Ankoatra izany, tsy tratra ny fanamby ny kaominina hahaleo tena ara-bola tamin’iny taona iny. Araka ny fanazavan’ny ben’ny tanàna an’Ampitatafika fa ny asa mandeha no nahafahana nanamboatra foto-drafitr’asa. Nanampy tamin’ny fampandrosoana ny kaominina ny PUD na “plan d’urbanisme détaillé” satria rehefa misy ny fividianana tanimbary dia mazava ho azy fa hisy ny fanotorana. Efa nalain’ny kaominina mialoha ny vola tokony aloa amin’ny fanotorana ny tany. Anisany nahafahan’ny kaominina nihetsika izany.
Raha tanisaina ny asa vitan’ny kaominina Ampitatafika tamin’ny taona 2018 dia ao anatin’izany ny fametrahana jiro an-dalam-be miisa 45, ny fanamboaran-dàlana eny anelanelan’ny fokontany izay mirefy efatra kilometatra, ny fanampiana ny efitranon-tsekoly, ny fanadiovana ny tatatra hiatrehana ny fahavaratra, ny fividianana “kubota” miisa roa sy cyclo-pousse miisa valo handraofana fako… Nilaza ihany koa ny ben’ny tanàna fa voaloa avokoa ny karaman’ny mpiasa sy ny volan’ny CNAPS. Tsy hisy olana ny fampandehana-draharaha ny kaominina mandritra ity taona 2019. Nividy tonner (encre) miisa 50 ny kaominina ka haharitra hatramin’ ny volana janoary 2020 izany. Marihina fa mbola mitohy amin’ity taona vaovao ity ny fanamby ny kaominina ambanivohitra Ampitatafika mba hahaleo tena ara-bola.
One comment on “KAOMININA AMPITATAFIKA: Ny mampandeha ny fampandrosoana”
Pingback: KAOMININA AMPITATAFIKA: Ny mampandeha ny fampandrosoana - ewa.mg